Imoto isebenzisa izinto eziningi ezisebenza ngokubambisana kanye nezinhlelo. Enye yalezi - pholisa. Ngesikhathi kokuhlinzwa, injini inike omningi ukushisa. Ngaphandle-ke uhlelo ukupholisa ukuze overheat e Ngemizuzwana. Vele balondoloze elikhulu lokushisa ububanzi, futhi uhlelo Kuye kwanikezwa. Bambalwa abantu abacabanga ngayo, kodwa ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuze silondoloze. Omunye le misebenzi - esikhundleni uketshezi lwaluyophola. Kuyini siveza nokuthi ingakanani ukuthulula emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ku Vaz-2110? Impendulo Bheka isihloko namuhla yethu.
I Vaz "okweshumi" umndeni (kuhlanganise esiteshini izinqola hatchbacks) umkhiqizi uncoma ukusetshenziswa emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni yasekhaya.
Lo luketshezi is batheleka imoto ngisho kusukela embonini. Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni - ukuthuthukiswa Soviet 70s. Kuyinto analog of emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni amazwe. Kodwa izindleko kuba eshibhile kancane. Njengasekugumbuqelweni emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni, isetshenziswa izithasiselo lapha ngaphezulu:
Anticorrosive futhi t. D.
Uyini emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni umehluko?
Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni siqukethe ethylene glycol, okuyinto buhlanjululwe ngamanzi distilled endaweni isilinganiso esithile. Ngokungafani umkhiqizo amazwe, iqukethe kuze kufinyelele amanzi amaphesenti angu-50. I emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni kuyinto CONCENTRATE okumele buhlanjululwe uqobo. Kodwa lokhu akudingekile. Amanzi angaphansi e ukwakheka, ephansi izinga lokushisa okokuqandisa yayo.
Ngaphandle emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni lowehlukile. It has tinge bluish, ngenkathi anti-nqabela is zipendwe ngemibala ehlukile. Lokhu kungaba:
Green (iqembu G11).
Red noma Yellow (G12).
Purple (G12 +).
Izimpawu emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ingafaniswa ukusebenza emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni Group 12.
Lena esinye isici okuhlukanisa kusukela emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni. Ngakho, umthombo ketshezi basekhaya iminyaka 2 noma 60,000 amakhilomitha. Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni yakhelwe iminyaka 5 noma izinkulungwane 150 amakhilomitha. Uma usebenzisa "sekwephuzile" uketshezi kungaba overheat motor. Ngokuhamba kwesikhathi, lo okufakiwe ayisekho isicelo. KULETHA Liquid kwakhiwa ishq. Corrosion izinqubo uqale.
Kungakanani okufanele wena uthele emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ku Vaz-2110?
Manje siza okumqoka. Cooling uhlelo lifaka yesibili ngemuva ivolumu uphethiloli ithangi. Zingaki amalitha emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ibe Vaz-2110 ukugcwalisa? Umenzi uncoma ukusetshenziswa 7.8 amalitha uketshezi.
Ingabe kukhona umehluko injini 8- futhi 16 valve?
Njengoba yaziwa, imodeli kuqala "eziyishumi" ifakwe imishini esakhiweni esidala nge 8 valve isikhathi indlela. Ngo kowezi-2000, ngokuvumelana kwafika 'shesnar "odumile, okuyinto walithanda abashayeli amandla okusezingeni eliphezulu kahle. isikhathi esinjalo indlela has ubuhle nobubi bayo. Kodwa lapho izinsizakalo umbuzo ophakamayo, bangaki emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni uthele ku Vaz-2110.
Isikhulu ekuphenduleni nomkhiqizi - okufanayo 7.8-litre. Kungani lesi sibalo ngoba motors okufanayo lapho valve 16 no-8? Indlela emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni hhayi lei, izinga izohlala ingashintshiwe ku Vaz-2110. Futhi zonke ngenxa ukuthi block lezi izinjini uyefana. A ukupholisa ikhava valve engekho. Lokhu ivolumu emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni kwanele kuphole namandla, futhi "ikhanda".
Ayikwazi ugcwalise amalitha 5-6 kuphela. Yini okumelwe uyenze?
Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ngokuvamile edayiswa 5-litre bafike bachitha amabhakede anendle. Ukuze bavale isikhala salo, sidinga izingcezu ezimbili (lonke zingabekwa ku-uphole up ", hhayi exutshwa namanzi ilindele ebusika). Kodwa ngemva nkinga ethangini ubudala uketshezi ugcwele esiphezulu emva ibhokisana lokugcina itiye noma ikhofi kuqala. Ungethuki - lokhu kungokwemvelo. Yonke ivolumu bazokwazi ukugcwalisa kuphela ngemva kwegazi egcwele emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ohlelweni.
Bay ezingeni walo omkhulu, qala injini bese kulungele ke ukuba lokushisa ukusebenza. Khona-ke bayeke futhi uhlole ezinye emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ethangini. Ngo-99 izimo uwela ubuncane (nokubhubhisa mhlawumbe ngokuphelele ithangi). Ngemva kwalokho, siyobe ukubuyisela izinga amalitha asele uketshezi.
Indlela uthele emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ku Vaz-2110? Hhayi ngaso sonke isikhathi okungcono kakhulu - kuhle. Lokhu kusebenza kokubili amafutha engine futhi emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni echibini. Kumele akhiwe endaweni ephakeme isilinganiso. Uma ngaphezulu - kwakheka overpressure Uhlelo, okuyinto nje azixoshe Ukwakheka olubonakalayo. Uma valve ungaphakathi traffic-non-ukusebenza kungaba futhi enza aphule ethangini. ketshezi ikhulisa at okushisa ephakeme. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba anikezele ngenani elithile isinxephezelo. Kodwa izinga ongaphakeme - hhayi okuhle. Kulokhu, ithangi angaqhuma, kodwa injini kungase overheat. Ngeke ukusebenza okusezingeni eliphezulu lokushisa imodi. Ngesikhathi "phezulu eziyishumi" uhla evamile kuyinto 85-90 degrees Celsius.
Thola indlela emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni kakhulu Vaz-2110 udinga ukugcwalisa, kufanele ukhulume emoyeni ohlelweni. Angavu- at Gulf entsha okusamanzi ohlelweni. Ngakho-ke, sinamathela zikhawu encane ukuba emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni kancane kancane bayeka isikhala ethangini. Awukwazi ukugcwalisa izingxenye yakhe enkulu "ukuze emphinjeni", ashaya nxazonke. Indlela emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni e Vaz-2110 uthele? Impendulo - 7,8 l. Ngezinye izikhathi, ngisho nangemva kokuyalwa kaningi uphole emoyeni ngeke zinyamalale. Wokukhipha kuye kanje:
Beka imoto engaphambili egqumeni.
Vula isivalo Engxenyeni ethangini.
Qala injini izinga lokusebenza yayo.
Misa injini futhi ngokusebenzisa igilavu (ukuqaphela - hot) cindezela umlomo wombhobho yasenhla nemithombo yasenzansi ephuma kurediyetha.
Ngakho, siba iningi displacing emoyeni kusukela ohlelweni. Ukuba khona kwawo kuyingozi kakhulu injini. Air iholele kalula okweqile.
Yikuphi umkhiqizo ukuyisebenzisa?
abanikazi abaningi nemoto ashintshele ukusetshenziswa anti-nqabela, bethi kungcono futhi has ukusebenza okungcono. Kodwa amanani ayo ezibuye liphenduka. Ngakho kunengqondo ukusebenzisa emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni yasekhaya, ikakhulukazi njengoba iningi labantu liye lenzelwa Vaz izimoto. Baningi okubuyayo etholakele emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni "UFeliksi" umkhiqizi. Bayidayise amathini e-10, futhi ngaphansi kuka 5 amakhilogremu. Izindleko amalitha eziyishumi emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni kuyinto ruble 630. Kuyinto engabizi, uma ucabangela ukuthi cishe ingxenye yesine kuyoba ngaphezulu "phezu uphole." Ukwakheka amathumba at lokushisa 110, futhi iqandiswe -40 degrees Celsius. Futhi, lolu nkampani inyathelisa futhi emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni. ukubaluleka komkhiqizo 11 neqembu lesibili (green) kuyinto ruble 1040 ngalinye 10 amalitha.
Cooling uhlelo - kuyingxenye ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi injini. Ukwazi indlela emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni kakhulu Vaz-2110 ukugcwalisa, uyobe ukuqinisekisa kuye operation eside futhi okuqhubekayo.
Ukudlidlizela lapho nisuke: i neistravnosti kungenzeka nokuqeda zabo